Location: musha » Kutumira » Nyika | Dunhu » EU » Dhipatimendi reUS State ikozvino rinogadzirira Embassy yeUS muUkraine kuRussia Invasion
Danho reUS rekubvumidza vashandi vemumiriri weUS kuti vabve muUkraine nekuda kwekupinda nechisimba kweRussia harina kungoparadzirwa mukuburitswa kwenhau neUS State Department uye yakatumirwa kuUS Embassy Webhusaiti yeUkraine.
Russian State-sponsored media RT haina kuyedza kuramba kana kudonhedza pasi asi yakakwidza meseji zvishoma mukuwedzera izwi rekuti "kurairwa" mukuti: Mhuri dzevamiriri veUS vakarairwa kuti vabve muUkraine, nepo vamwe vashandi vemumiriri vakabvumidzwa kuenda “kuzvidira” hwaro, maererano nezano rakagadziridzwa rekufamba iro rakadzokorora zvichemo zve “yakaramba ichityisidzirwa nehondo yeRussia.
Musi wa24 Ndira, Dhipatimendi reHurumende reUS rakabvumidza kubuda kwekuzvidira ("kusimuka kwakatenderwa") kwevashandi vehurumende yeUS uye rakaraira kubuda kwenhengo dzemhuri ("kurairwa kuenda") kwevashandi vehurumende yeUS kuEmbassy yeUS muKyiv, kushanda nekukurumidza.
Kuenda kune mvumo kunopa vashandi ava sarudzo yekubuda kana vachida; kuenda kwavo hakudiwe. Kuenda kwakarairwa kwenhengo dzemhuri kunoda kuti nhengo dzemhuri dzibude munyika. Mamiriro ekuenda kweEmbassy yeUS achaongororwa pasati papera mazuva makumi matatu.
Dhipatimendi reHurumende rakaita danho rekubvumidza kubva kuMission Ukraine kubva mukuchenjerera kwakawanda nekuda kwekuenderera mberi kweRussia kuedza kukanganisa nyika uye kukanganisa kuchengetedzeka kwevagari veUkraine nevamwe vanoshanya kana kugara muUkraine. Isu tanga tichibvunzurudza hurumende yeUkraine nezve danho iri uye tiri kuronga neAllied uye vanodyidzana embassy muKyiv sezvavanoona maitiro avo.
Pamusoro pezvo, Dhipatimendi reHurumende rakasimudza danho redu rekutanga reKufamba kuUkraine kusvika Padanho rechina - Usafambe nekuda kwekuwedzera kwekutyisidzira kwechiito chikuru cheRussia kurwisa Ukraine. Iyo Yekufamba Advisory yanga yatove paNhamba Yechina - Usafambe nekuda kweCOVID-19.
Tinoramba tichisimbisa kutsigira kwedu vanhu vekuUkraine uye tinozviita tichizvipira kune chimwe chezvakanyanya kukosha muDhipatimendi, kuchengetedzwa nekuchengetedzeka kwevamiriri vedu nevanhu vekuAmerica. United States inosimbisa kuti Embassy yeUS kuKyiv inoramba yakavhurika kuti ishande nguva dzose. Saizvozvo, isu tinosimbisa kuti sarudzo yakabvumidzwa/yakarairwa yekubva haizokanganise kuzvipira kwedu kwekutsvaga mhinduro yehumiriri hweRussia inotambudza zvikuru kuvaka kwemauto mukati nekupoterera Ukraine.
Kuzvipira kwakasimba kweUnited States kuhutongi hweUkraine uye kutendeseka kwenzvimbo kunoramba kwakasimba kupfuura nakare kose, sezvakaratidzwa mukuunza muna Ndira 22 yekutanga yezvakati wandei kutakura kwemamiriyoni mazana maviri emamiriyoni emadhora mukubatsira kuchengetedza mauto eUkraine, achitungamirwa neMutungamiri Biden. Ukraine munaDecember.
Isu tinosimbisa kuti Russia yakatiisa munzira yazvino. United States yakagara ichitaura nezvenzira mbiri dzinosarudzwa neRussia: nhaurirano uye diplomacy kana kukwira nemhedzisiro yakakura. Ipo United States ichiramba ichitevera nzira yenhaurirano uye dhipatimendi, kana Russia ikasarudza kukwira nemhedzisiro yakakura nekuda kwechiito chikuru chemauto kuUkraine, mamiriro azvino asingatarisirwe ekuchengetedza, kunyanya pamiganhu yeUkraine, muCrimea inogarwa neRussia, uye muRussia- inodzorwa kumabvazuva kweUkraine, inogona kushata nekuzivisa kushoma.
Neruremekedzo kuvagari vemuUS muUkraine, basa redu rekutanga nderekuita kuti vagari vemuUS vazive nezvekuchengetedza nekuchengetedza zviitiko, izvo zvinogona kusanganisira ruzivo nezvesarudzo dzekufamba dzekutengesa.
Sekutaura kwakaita Mutungamiriri wenyika, VaBiden, mauto eRussia anogona kuuya chero nguva uye hurumende yeUnited States haizokwanisa kubudisa vagari vekuAmerica munjodzi yakadai, saka vagari vekuUS varipo kuUkraine vanofanirwa kuronga saizvozvo, kusanganisira nekuzvipira. yezvisarudzo zvekutengesa kana vakasarudza kubva munyika.
Kyiv Rashiya Ukireni nyika dzakabatana
Israel inoronga ndege huru dzechiJudha kubva kuUkraine kana Russia ikapinda